Nifanenjehana hatreny Imerinafovoany : maty voatifitry ny polisy i vazaha, jiolahy rain-dahiny | NewsMada
Nifanenjehana hatreny Imerinafovoany : maty voatifitry ny polisy i vazaha, jiolahy rain-dahiny
Nanomboka teny Ambohimanarina, nitohy teny Soavimasoandro, hatreny Imerinafovoany Avaratra ny fifanenjehana teo amin’ny polisin’ny BC sy ny andian-jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana, omaly. Maty voatifitra tamin’izao ny iray, antsoina hoe Vazaha. Iray hafa voasambotra, raha tafaporitsaka ny telo hafa.
Tsy afaka teo anatrehan’ny polisy ny jiolahy na nitsoaka nanao izay farany heriny aza teny Imerinafoavoany Avaratra omaly. Matsy tsy tra-drano voatifitra ny iray, raha azo sambom-belona ny faharoa. Raha ny fantatra, nahitana basy P.A tany amin’ireto tavela ireto. Voalaza fa saika hanafika teny amin’ny manodidina an’Ambohimanarina na Soavimasoandro iny ireto andian-jiolahy ireto.
Efa tany Ambohimanarina no fantatra fa narahin’ny polisin’ny BC izy ireo. Nitsoaka tany Imerinafovoany Avaratra ireo olon-dratsy, raha vao nahafantatra ny fisian’ireo polisy. Niroso tamin’ny fisamborana avy hatrany ireto farany raha vao nahita fa manao tari-dalana mandositra ireo jiolahy. Nisy ny fifampitifirana tamin’izay, satria nitondra basy ireo, ka lavo teo ny iray, raha ny fanazavana.
Nihosi-potaka mihitsy ireo olon-dratsy sy ny polisy nandritra ny fifanenjehana satria nitsoaka tany anaty honahona ny sasany.
Nitangorona ihany koa ny olona teny an-toerana raha vao nahita ny fifanenjehana teo amin’ny roa tonta. Toy izany koa tamin’ny fitondrana ny razan’ilay jiolahy iray tao anaty fiara. Notarihina ary nakarina tambony tsikalan-kazo, izay narahan’ny olona maro varina nijery ity faty entina mandeha.
Efa nigadra teny Tsiafahy
Araka ny fanazavana azo, jiolahy efa nigadra teny Tsiafahy ity maty sy ilay tratra sambom-belona. Vazaha sy i Feno, izay raindahiny amin’ny fanafihana eto an-drenivohitra sy ny manodidina. Raha ny vaovao voaray ihany koa, miray tendro amina mpitandro filaminana iray ireo andian-jiolahy ireo, ary efa fantatra ny momba azy io. Mandeha, araka izany, ny fandihadiana sy ny fombafomba mety hisamborana ity voalaza farany.
Mandeha hatrany ny ady amin’ny asan-jiolahy eto an-drenivohitra ataon’ny polisy, ary misy ny ezaka atao amin’izany. Nampitomboina ny isan’ny polisy miasa manao fisafoana ary atao ihany koa izay handravana ireo mpanendaka amin’ny faritra maro, eto an-drenivohitra. Toe-javatra mbola mampikaikaika ny rehetra ity tranga farany.